Tsiaron’ny fandosiran’ilay zazavavikely Tiorkmenistana iray nitady fampianarana · Global Voices teny Malagasy
Sarotra be ho an'ireo tovovavy Tiorkmena ny handranto fianarana ambony any ivelany
Nandika (fr) i Nicolas Carlier
Voadika ny 30 Avrily 2022 17:00 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, srpski, Ελληνικά, Español, English
Sary an'i Kenjaeva Mufiza.
Tsy ny rehetra no ho afaka misitraka ny hatsaran'ny fampianarana tsy mitongilana, tsy asiana fitsaràna an-tendrony sy mankany amin'ny fandrosoana. Mety ho zavamahagaga ny fananana fahafahana misaina sy maneho izay ao an-sain'ny tena, mety mampisafotofoto sy mifanipaka raha toa ianao ka lehibe tao Tiorkemistana [en]. Nipoitra tamin'ny fiandohan'ny taona 1990 ny fihasimbàn'ny rafi-pampianarana tao amin'ny firenena, rehefa namoaka didy ny Filoha tamin'izany fotoana izany, Saparmurat Niyazov [en], fa tsy maintsy potehina avokoa ireo boky Sovietika,mba hifehezana ny fivezivezen'ireo antontan-kevitra vita printy [en]. Nanomboka hatreo, nijaly noho ny tsy fahampiana boky fianarana ireo sekoly tao Tiorkmenistana.
Nahazo ny diplôma tamin'ny fianarana ambaratonga faharoa tao Tiorkmenistana aho, folo taona mahery lasa izay ; ary mbola tsaroako tsara fa telo na efatra monja no boky fianarana azo nampiasaina ho an'ireo mpianatra 30 na maherin'io, isaky ny kilasy. Ireo lesona dia narafitra manodidina ny fandraisana an-tsoratra, amin'ny alalan'ireo boky na ny fitadidiana, tsy misy toerana natao ho an'ny fanadihadiana.
Tamin'ny taona 2001, namoaka didy i Niyazov fa mety hihasarotra ny tolonay ary nohafoheziny ho sivy taona ny taom-pianarana fa tsy 10 intsony [en]. Vokatr'izay, nihena ireo ora natokana ho an'ireo taranjam-pampianarana ary taranja maro no nesorina tanteraka tao anatin'ny fandaharam-pianarana toy ny fanatanjahantena, ny statistika sy ny toekarena. Na dia nisedra fahasahiranana aza aho sy ireo mpiara-mianatra tamiko, dia nangatahan'ireo manampahefana ireo mpampianatra mba hanome ny naoty fiakarana kilasy ho an'ny tsirairay, mba hanasongadinana ny fandrosoan'ny sekoly. Lasa “ozinina famokarana diplôma” ireo sekoly ambaratonga faharoa.
Na teo aza ny fahasahiranana, naniry hatrany aho ny hahazo fahalalana. Noararaotiko ireo fahafahana hianatra maimaimpoana ny teny anglisy, ary ny fahafahana mindrana ireo boky tao amin'ny tranomboky. Ny sasany taminay nanaraka fampianarana fanampiny momba ny tantara, matematika, kolontsaina eran-tany, fitsipipitenenana anglisy sy fifampiresahana, natolotr'ireo mpampianatra vahiny nizara ny traikefan'izy ireo tamin'ireo tanora Tiorkmena. Io zava-niainana io no nanosika ahy hanohy ny fianarako.
Na izany aza, tsy ilaozan-tsakana ny lalana hahazoana diplôma teny amin'ny anjerimanontolo. Ireo sakana ara-bola, ara-kolontsaina sy ara-politika no nanakana ny fanohizako ny fianarana ambony. Ny fampianarana, na dia maimaimpoana aza, dia mbola tsy takatry ny ankamaroan'ireo olom-pirenena avy amin'ny saranga antonony. Mba hidirana eo amin'ny anjerimanontolon'i Tiorkmenistana, fomba fanao ny manome tsolotra ho an'ireo tomponandraikitry ny sekoly [en]. Nanova hatramin'ny fotony ny natiora sy ny tanjon'ny fampianarana tao Tiorkmenistana ny tsolotra sy ireo fanovàna mahatsiravina teo amin'ny rafi-pampianarana. Amin'izao fotoana izao, ny ankabeazan'ireo olom-pirenena Tiorkmena dia tsy mahita ao anaty fampianarana afa-tsy fomba iray hahazoana diplôma sy asa tsara karama kokoa.
Ady ho amin'ny tetezamita
Taorian'ny fahaleovantena, very asa ireo ray amandreniko, asa azony nandritra ny vanimpotoanan'ny Sovietika, satria tsy ampy intsony teo amin'ny sehatry ny tsenan'asa vaovao ireo diplôma azony. Na teo aza ny zava-mampahory niainan'izy ireo, nomeny lanja lehibe hatrany ny fampianarana ary indraindray ampandeferiny ny kaliataon'ny sakafo sy ireo fitafianay mba handoavana ny saran'ny fianarako teny anglisy.
Tsy reraka ny reninay mamerimberina fa tsy maintsy mianatra izahay mba hialàna amin'ireo fahasahiranana ara-bola nolalovan'izy ireo. Tafalatsaka lalina tao an-tsaiko ireo anatr'izy ireo.
Nikaroka mpiantoka aho mba hianarana any ivelany noho ny fahakelezan'ny fahafahana mianatra ao an-tanindrazako. Nanolotra tetikasa fanampiana ireo masoivoho avy any ivelany, toy ny vatsim-pianarana sy ny tsy fandoavana saram-pianarana ho an'ireo mpianatra Tiorkmena manan-talenta. Nitomany aho raha vao naharay antso : ho voavatsy ara-bola manontolo aho hanatontosako ny fahazoana ny diplôma bakalorea any amin'ny anjerimanontolo iray any ivelany, miaraka amin'ny fandaharam-pianarana amerikanina. Ranomasom-pahasambarana mampirediredy ireo.
Ny fahazoana ny fankatoavan'ny raiko no sakana farany tsy maintsy noresena. Ao Tiorkmenistana, misy an'ity fomban-drazana ity : “Ogul düzde, gyz öýde » («ny ankizilahy tsy maintsy any an-tsaha, ny ankizivavy any an-trano”). Nila ny fanampian'ny tanàna manontolo aho mba handresy lahatra ny raiko. Nihevitra aho fa hizzotra amina fiolanana iray vaovao iahny ny fiainako nony farany rehefa nanaiky izy.
Rehefa tonga ny andro handehanana, vory teny amin'ny seranam-piaramanidina avokoa mba hanao veloma ahy ireo ankolafim-pianakaviana rehetra . Sady koa, izaho no zazavavy voalohany tao amin'ny fianakavianay nandao ny firenena. Tsy azoko nafenina ny fientanentanako teo anivon'ny ahiahin'ireo havako akaiky. Taorian'ireo fifamihinana tsy nanam-pahataperany, niroso ampifaliana teo amin'ny toerana fisavàna ny pasipaoro aho. Nahita ho avy mamirapiratra miandry ahy aho, na farafaharatsiny, izany no noeritreretiko.
Rehefa avy nandinika tsara ny pasipaoroko sy ny fahazoako mivahiny ho an'ny mpianatra, niteny tamiko ara-bakiteny ilay mpiasa misahana ny fifindramonina fa tsy mahazo mivoaka ny fireneko aho. Tsy nety nandray ireo fanontaniako izy ; fa, noraisiny ny sandriko dia natosiny hivoaka ny faritry ny fisavàna pasipaoro aho. Zendana aho. Taty aoriana kely vao fantatro tamin'ny masoivoho fa ny governemanta ao Tiorkmenstana no nandràra samirery ireo mpianatra tsy hivoaka ny firenena ka handeha hianatra any amin'ireo anjerimanontolo sasantsasany any ivelany.
Nifandimby ny volana maro, efa nisosa sahady iza noeritreretiko ho enim-bolana voalohany ho ahy, nefa izaho mbola nihitsoka tao Tiorkmenistana. “Nahoana izy ireo no miady aminay ?”, fanontaniana nipetraka tamiko io nandritra ny enina volana.
Nandritra izany fotoana izany, tsy tapaka naka am-bavany ahy ireo manam-pahefana ao amin'ny Komitin'ny fiarovam-pirenena (izay fantatra tamin'ny anarana hoe KGB taloha). Ireo mpianatra hafa nitovy anjara tamiko dia niaritra ihany koa, tsy inona fa fanadihadiana nandritra ny ora maro. ireo fanontanian'ny fiarovam-pirenena dia nisarika ahy hino hoe tsy nitokisan'ny governemanta ny tanjon'ireo vatsim-pianarana ka nandraisany fanapahankevitra ny nampiditra anay ho tao anaty lisitra mainty. Angamba ireo manam-pahefana ao amin'ny KGB nanombatombana fa hanomana mpanohitra amin'ny ho avy ireo masoivoho sy ireo anjerimanontolo any ivelany, izay hanohitra ny fitondrana. Tetika iray mahazatra ny KGB hatramin'ny taona ampolony maro Ny lisitra mainty [en], mba hanaraha-maso ny orinasa sy hamafazana tahotra. Namboly tebiteby sy tahotra ireny tetika ireny, ary nitarika aretin-tsaina nitaiza, izay ezahiko resena hatrany.
Arakaraka ny niaretako tsindry sy fanenjehana, ny sivana sy ny famoretana, no ahatsiarovako ny andalan-tenin'ilay feminista poeta mpanohitra, Annasoltan Kekilova [en] tamin'ny taona 1960 manao hoe : « Dönmerin öz pikrimden/Atsalarda ýanaryn oda… » («Tsy hiala amin'ireo eritreritro aho, ary raha atsipiny anaty afo aho, dia hirehitra”). Nampiasaiko ireo andininy ireo ho toy ny teny fitanisa mba hitazonako ireo nofinofiko, no sady mitohy ihany mivelona eo ambanin'ny fitondrana mitatra lavareny, lozabe, mpampahory sy tsy refesi-mandidy. Ara-tsaina, vonona aho ny higadra, hanipy ny tenako anaty afo ara-panoharana, toa izay hamoy ny fanantenako hahazo fampianarana.
Volana maromaro nisian'ireo fifandresen-dahatra ara-diplomatika no nahafahana nanala ny fandraràna an'ireo mpianatra sasantsasany, nampihena ilay lisitra mainty, nony farany. Afaka nandao ny firenena ihany aho ary nanatanteraka ny nofinofiko goavana handranto fianarana, sady nahazo ny diplôma ‘maîtrise’ mihitsy aza. Na izany aza, nisy fiantraikany tamin'ny fahasalaman'ny saiko sy ny fanahiko ireo zava-nitranga, izay mbola maratra na dia ampolo taona mahery aty aoriana aza. Mbola mihelohelo amiko hatrany ireo horohoro nozakaiko, ao anatin'ireo nofy ratsiko, ary ny tena marina, isakny ny tsy maintsy mandalo fisavàn'ny ladoany aho manerana izao tontolo izao.
Aza adino ireo zanakay vavy
Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2020, nampiasain'ireo tomponandraikitra ao Tiorkmenistana ho alaolana ny valanaretina COVID-19 mba hanakanana ireo olompireneny tsy hivoaka any ivelany. Raha toa namaky ireo vaovao mampatahotra aho mikasika ny fanakatonana sekoly, na vokatry ny valan'aretina – na dia nanamafy foana aza ny governemanta fa tsy voakasika ny firenena – na noho ny krizy ara-tontolo iainana atao hoe “Dust-19″, mandeha rà ny foko noho ireo tanora, anisan'izany ireo zatovovavy, izay amin'ny ankapobeny, natao sorona ny fanabeazana azy ireo ao amin'ny firenena ho tombontsoan'ny fampianarana ny anadahin-dry zareoa. Raha ny marina, araka ny fomba ao Tiorkmenistana, mahazo manambady ireo ankizivavy fa ireo zazalahy kosa andry ho an'ny fianakaviany. Vokatr'izay, amin'ny vanimpotoanan'ny krizy ara-toekarena mitarazoka, misafidy ny mampanambady ny zanany ireo fianakaviana mba hanamaivanana ny fahasahiranana ara-toekarena. Ny mampanambady ireo ankizivavy raha mbola tanora dia fomba fanao hatry ny fahagola mba hanomezana antoka ny fiahiana ara-bola ho an'ilay vehivavy manambady sy ny fianakaviany. Ao anatin'ireo fepetra ireo, voahilika hatrany hatrany ireo zazavavy Tiorkmena tsy ho ao anatina habaka iray izay efa voafetra eny amin'ny fampianarana ambony.
Raha tsy ohatra ka miteny ny fianakaviambe iraisam-pirenena ary manery ny Governemanta Tiorkmena hamerina ireo sidina sy hanamora ireo fifanakalozana iraisam-pirenena.Manantena aho fa ireo tenin'ny Filoha mpisolo toerana amerikanina, Kamala Harris, tamin'ny 16 Martsa, nandritra ny fivorian'ny Vaomieran'ny Firenena Mikambana mikasika ny fepetra iainan'ny vehivavy, rehefa nanambara izy fa “ny fepetra iainan'ny vehivavy no fepetran'ny demokrasia”, dia hidika ho fanolorantena iraisam-pirenena nohavaozina ho an'ny fitovian'ny lahy sy vavy, ny zon'olombelona ary ireo hetsika ho amin'ny tetezamita demokratika ao Tiorkmenistana.